Hooyo maxkamad ku dacweysey dowladda Iswiidhen - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Hooyo maxkamad ku dacweysey dowladda Iswiidhen
La daabacay onsdag 12 juni 2013 kl 10.40
Carina Höglund oo hooyo u ah gabadha lagu magacaabi jirey Engla Höglund oo la dilay sannadkii 2008 ayaa ruqsad ka heshay maxkamadda rafcaanka in dacwaddeeda dib loo baaro. Sidaas waxaa soo weriyey Wakaaladda wararka ee TT.
Sannadkii hore ayey ahayd markii ay maxkamad ku dacweysey dowladda Iswiidhen maadaama ay u aragtey in ninkii dilay gabadheeda oo lagu magacaabo Anders Eklund la qaban karay xilligii uu magaalada ku diley Pernilla Hellgren oo ahayd sannadkii 2000 haddii ay boliisku dabagal ku samayn lahaayeen wararkii ay ka heleen dadweynaha.
Dacwaddii ay horgeysey maxkamadda degmada ayey hooyadani ku guuldarreysatay, laakiin rafcaan ayey ka qaadatay. Sidaas darteed ayey maxkamadda rafcaanku u go’aamisay maalintii isniinta in arrinteeda dib loo furo.